Indlu entsha ye-Luxury 18 min ukusuka eLjubljana - I-Airbnb
Indlu entsha ye-Luxury 18 min ukusuka eLjubljana
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguBarbara
Ikhaya elisanda kulungiswa, langoku kunye nefenitshala entle, yabucala ngokupheleleyo kwindawo eqhelekileyo yaseSlovenia ekhuselekileyo kufutshane neAlps (iintaba), ivenkile, ibhayisekile kunye neendlela zokuhamba elunxwemeni lomlambo, indawo yokutyela engaphaya kwesitrato. Ilungele iintsapho (kunye nabantwana), abahlobo okanye izibini. Iimpawu: ngaphandle kwekhitshi, i-barbecue, ilungele ukuphumla okanye ukonwabisa. Embindini weSlovenia, indawo entle yokuhlola iSlovenia, kufutshane nokufikelela kuhola wendlela. Ljubljana ngaphantsi kwe 20 min drive kude.
Ukuba ungumhambi onenkani oyikhathaleleyo indawo ohlala kuyo kunokuba le yindawo yakho. Ukuba ufuna ngakumbi ukuva ukuba kunjani na ukuhlala njengendawo yokuhlala kwindawo ekhuselekileyo yokuhlala, awuyi kufuna ukuyishiya indawo. Ikhaya lifanelekile kwabo banenkathalo ngendawo abahlala kuyo. Butofotofo kakhulu kwindawo entle. Kodwa ukuhamba okufutshane kuzo zonke iindawo ezinomtsalane eSlovenia.
Ukuba awufuni ukuhlala upakisha kwaye usuka kwesinye isixeko uye kwesinye, kodwa ukhetha ukuchitha iveki okanye ezimbini kwindawo enye kwaye kunokuba uqhube ukuya kwiindawo, le yindawo yakho. Uya kukwazi ukuqhuba ujikeleza, kwaye uphumle xa ubuya. Funda incwadi, yonwabele ibarbecue okanye ubukele imuvi kwiscreen esikhulu sikamabonakude, yeka abantwana babaleke phandle engceni. Kufuphi neentaba, hamba ngebhayisekile ngaselunxwemeni lomlambo kwimizuzu nje embalwa. Ndiyaqinisekisa, le yiholide oya kuyikhumbula kwaye uya kufuna ukwabelana ngayo naye wonke umntu omkhathalelayo.
4.74 · Izimvo eziyi-40
Indawo yokuhlala eqhelekileyo yaseSlovenia. Indawo yokutyela engaphaya kwesitrato (kwaye bayazisa!), Ivenkile yegrosari inyathelo kude, indawo yokuthenga enkulu kumgama oyi-1 km kude, park ecaleni komlambo imizuzu kude. Abamelwane abanobuhlobo kakhulu ngokunjalo. Ukuba uya kuba nobubele kubo, ngokuqinisekileyo baya kubuya babe mnandi!
Ndihlala ndifumaneka kuyo nantoni na undwendwe olunokuthi luyifune. Ndinqwenela kakhulu ukwenza iindwendwe zihlale zikhumbuleka kwaye ndonwabile ukunceda ukucwangcisa uhambo lwazo oluya eSlovenia, iingcebiso ngeendawo ezinexabiso kunye neendawo zokutyela ezinokutyiwa.
Ndingacebisa iindawo zokutyela ezigqwesileyo kubathandi benyama kumanqanaba ahlukeneyo exabiso, iingcebiso zokungcamla iwayini kwingingqi yaseBrdo, uhambo olulula lokuhamba intaba (iVelika planina), kunye nemisebenzi yokhenketho jikelele echibini iBled, izinto omawuzenze kwaye uzibone eLjubljana, undwendwela indawo enkulu. Umqolomba wePostojna okanye umqolomba omhle weŠkocjanske.
Ukuba undazise ukuba luhlobo luni lweholide kunye namava owukhangelayo, ndingalungisa iingcebiso zam ukuze zilingane nolindelo lwakho. Ndicinge njengomcebisi wakho wokuhamba eSlovenia.
Ngokwenyani, ndilihambile ilizwe, ndahlala kwiihotele ezininzi ezi-5 *, ndabona iindawo ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi, ke ndiyazi ukuba kubonelelwa ntoni phaya. Kuwo nawaphi na amava enqanaba eSlovenia anokudityaniswa, kodwa kwiqhezu leendleko, kwaye amaxesha amaninzi ngendlela esondeleleneyo, ye-boutique. Ndazise nje into oyifunayo (uhambo olunoxolo oluzolileyo lokuphumla olunomtsalane, ugxininiso kumava amnandi kunye newayini, igalufa, ukukhwela intaba, imidlalo yasemanzini, ukutyibiliza, iminyhadala yenkcubeko kunye nemiboniso yobugcisa,…
Kodwa ukuba ufuna nje izitshixo zendlu kwaye uya kuzifumana wedwa, ndilungile naloo nto.
Ndihlala ndifumaneka kuyo nantoni na undwendwe olunokuthi luyifune. Ndinqwenela kakhulu ukwenza iindwendwe zihlale zikhumbuleka kwaye ndonwabile ukunceda ukucwangcisa uhambo lwazo…